Sihlala sonwabile ukunceda. Thepha ngeenkcukacha ezingezantsi.
Iindaba, izaphulelo kunye nohlaziyo
I-imeyile okanye i-2 ngonyaka ngeendaba kuhlaziyo, iimveliso ezintsha kunye nezaphulelo. Cofa ukuze ubhalise.
Ulahlekile okanye akafumananga isitshixo sakho seLayisensi
Amaqhosha elayisensi ahlala ngokuzenzekelayo kwaye athunyelwa kwangoko kwi-imeyile yakho. Ukuba awuyifumani ke ikwincwadi yakho yogaxekile, usenokuba uyipelile okanye usenokusebenzisa enye idilesi ye-imeyile.
Ngayiphi na imeko, ngena ngaphakathi esitolo ubone ii-odolo zakho, amaqhosha elayisensi kunye nokutshintsha i-imeyile kunye nolunye useto okanye usebenzise i Ukubuyisela ilayisensi Iphepha lokuba nazo zonke izitshixo zeelayisensi zakho zangaphambili zithunyelwe nge-imeyile.
Imibuzo yokuthengisa kwizinto ezithengiweyo kwi-Apple okanye kuGoogle
Q: Ukuba ndiyicimile iapp yakho okanye ndinomnxeba omtsha, ndingaphinde ndiyifumane njani i-app?
APhinda uyikhuphele kwakhona usebenzisa i-ID enye okanye i-imeyile obukhe wathenga ngayo usetyenziso. Cofa kwiikhonkco ukuze ufunde ukukhuphela kwakhona iapp oyithengileyo Ivenkile yeApple iTunes okanye kwi I Google Play Store. Ukuba uyazibuza ukuba uyithengile na iapps unokujonga iirisithi zakho kwiVenkile yeApple yeApple okanye kuGoogle Play.
Q: Ndithenge iapp yakho. Ndiyifumana njani irisithi, ndikhangela intlawulo, ndibuze umbuzo wentengiso?
A: Nxibelelana Ivenkile yeeApple yeApple okanye iGoogle Play, naphi na apho uthengile khona. Asinakukunceda ngokuthengisa kodwa singakunceda ngenkxaso yetekhnoloji yeapps zethu.
Q: Ukuba nditshintshile nje ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iPhone okanye i-iPhone ukuya ku-Android kwenzeka njani ukuba ndiyitshintshe?
A: I-Apple kunye noGoogle balawula konke ukuthengisa kwaye ababoneleli ngendlela yokwenza oko.
Ubungakanani, iZiza kunye neeLayisensi zeZemfundo
Ivenkile yethu igcina ngokuzenzekelayo amaxabiso ayo ukuya kutsho kwiikopi ezili-100. Cofa apha ukuya kwivenkile yethu ukuthenga ngobungakanani.
Ukulungela amaxabiso emfundo, KUFUNEKA ukuba ube ungumsebenzisi wokugqibela ofanelekileyo wemfundo:
I-faculty, abasebenzi okanye umlawuli, okwangoku uqashwe kwisikolo esiqinisekisiweyo se-K-12 okanye kwiziko lemfundo ephakamileyo, kunye nedilesi ye-imeyile yemfundo.
Abafundi abakho okwangoku ubhalise kwiziko lemfundo ephakamileyo elivunyiweyo, ngedilesi ye-imeyile yemfundo.
Eminye imibuzo yokuthengisa kunye namaxabiso nceda Qhagamshelana nathi.
Imigaqo yelayisensi yoSetyenziso
Ilayisensi ikuvumela ukuba ufake kwaye usebenzise usetyenziso nakweyiphi na ikhomputha onakho okanye uyilawule ngokwakho. Ukuba iapp iyakusetyenziswa ngabanye abantu kwezinye iikhompyuter ezifuna ilayisensi yayo.
Xa uhlaziyo lubandakanya uphuculo oluncinci kunye nokulungiswa (umzekelo ukulungiswa kwe-bug, ukusuka kuguqulelo lwe-2.0 ukuya kwi-2.3, njl. Njl.), Bahlala bekhululekile kubasebenzisi abanelayisensi.
Ukuphuculwa okukhulu kweenkqubo kuza rhoqo emva kweminyaka emi-2 okanye engaphaya. Ukuphucula ngelo xesha kuhlala kungama-50% kwixabiso eliqhelekileyo labathengi bangaphambili. Ukuphuculwa kubandakanya isoftware kunye nenkxaso yeetekhnoloji kwiminyaka emi-2 ezayo.
IPlum emangalisayo ibonelela ngohlobo olupheleleyo olusebenzayo lwayo yonke isoftware onokuyisebenzisa ukuvavanya ukulungela kwakho kwiimfuno zakho ngaphambi kokuthenga, zonke izicelo zokubuyiselwa kwemali zivavanywa ngokwemeko-yecala kwaye zinokuphantsi komrhumo wokulungisa ubuncinci we-15% . Ukucela ukubuyiselwa kwemali, nceda unxibelelane nesebe lethu lokuthengisa malunga neentsuku ezingama-30 zokuthenga kwakho.
Cofa apha kwiphepha lethu lokudibana netekhnoloji, ukuthengisa kunye nayo yonke eminye imibuzo.